Kooxda Arsenal oo sabab layaab leh u beddeshay magaca barteeda Twitter-ka – Gool FM
(London) 28 Mar 2020. Xilli ay Arsenal u dabaal dageyso xusuusta taariikhda ugu weyn ee kooxda soo martay, Gunners ayaa beddeshay magacii ugu qornaa barteeda Twitter-ka.
Naadiga ka dhisan waqooyiga London ayaa xusuus iyo taariikh u sameysay horyaalka Premier League kaddib markii xilli ciyaareedkii 2003-04 ay ku qaadeen horyaalka iyagoo aan laga adkaanin.
Arsenal ayaa hadda xuseysa taariikhdaas uu hoggaamiyaha ka ahaa Macallin Arsene Wenger, maadaama horyaalka ciyaaristiisa la xannibay sababo la xiriira coronavirus oo ku faafaya England.
Magacii ahaa Arsenal ayaa waxaa loo beddelay “Arsena” iyadoo xarafkii ugu dambeeyay ee “L” laga tiray, waxaana lagu micneeyay sabab ka yaabisay xitaa taageerayaasha kooxda ku ciyaarta garoonka Emirates.
Mid ka mid ah taageerayaasha kooxda ayaa soo bandhigay sababta “L” looga tiray inay tahay inaysan ‘L’ rabin, oo la micno ah in xarafka “L” uu matalayo ama u taagan yahay “Loss” oo marka af-soomaali lagu micneeyo noqonaysa guuldarro.
We really changed the name of our account to ‘Arsena’ while live-streaming a documentary about The Invincibles.
We’re so shameless and I love it. pic.twitter.com/UmJgMTeKyA
— Patrick Timmons (@PatrickTimmons1) March 27, 2020
Waxa xilligan ku soo beegay ayaa ah inay dib u xusuusanayaan xilli ciyaareedkii horyaalka ay Arsenal ku qaadday guuldarro la’aanta.
Gunners ayaa adkaatay 26 ka mid ah 38-dii kulan ee ay horyaalka ka ciyaarta xilli ciyaareedkii 2003-04, iyagoo 12 kalena barbaro galay, waxaana horyaalka ay 11 dhibcood kaga qaadeen Chelsea oo ku soo xigtay.
Weeraryahankii hore ee qaranka Faransiiska, Thierry Henry ayaa ahaa hooggaamiyaha weerarka ee kooxda isagoo 30 gool ka dhaliyay horyaalka, waxaana ku soo xigay xiddiga ay wada dhalashada yihiin ee Robert Pires, kaasoo isagana 14 gool shabaqa taabsiiyay.
Si kastaba ha ahaatee, Arsenal ayaa ku guuldarreystay inay hanato afar koob oo kale oo ay xilli ciyaareedkaas heli kareen.
Wareegga nus-dhammaadka ayay kaga hareen koobabka FA Cup iyo League Cup, halka siddeed dhammaadka ay kaga hareen tartanka UEFA Champions League, sidoo kalena waxaa lagu garaacay koobka FA Community Shield.